Ukufundwa kwe-Semalt: Indlela yokwakha i-URL ephelele ye-SEO?
Izinjini zokusesha zisebenzisa ama-URL ukuze zihlanganise yonke idatha abayibuthele ephathelene nekhasi lokuqukethwe.Ukuklama kwe-URL kungenza umehluko mayelana nokusekelwa ukusekelwa ngokuthuthukiswa kwenjini yokusesha. Zizinto ezihlukahlukene ezibalulekile kuI-URL ngenkathi abanye bengaboni - correos electronicos de colombia.
iMenenja yeMpumelelo Yomthengi Omkhulu we i-Semalt Amasevisi weDividenti, uJack Miller, inikeza amathiphu indlela yokuthuthukisa i-SEO yakho nama-URL aphelele.
Izindawo Zendawo ZemiSebenzi Ehlukile (URL) zikwazisa iziphequluli nezinsizakalo lapho uzothola khona ikhasi.Lezi zixhumanisi zisefomethi efundwa ngabantu, futhi indima yabo ukumboza amakheli e-IP ngokusekelwe ezinombolo ezingaphansi.
Ukuze i-URL ibhekwe njengobungane, kufanele iqukathe amagama ngokungafani nezinhlu ezidekwezinhlamvu nezinombolo. Zisebenza ngempumelelo njengoba zisesimweni esingafundwa ngumuntu kanye nezinkomba zokubaluleka kwegama elingukhiye abazidluliselayoizinjini. Ezimweni eziningi, ama-URL adalwe ngokuzenzekelayo yi-platform yakho ayinobungane. Noma kunjalo, iningi lamapulatifomuokwamanje, ikuvumela ukuba wenze ama-URL abe mnandi ngokushintsha izinhlamvu ezizenzakalelayo nezinombolo ekuqondeni kwesayithi usebenzisa amagama wamakhasi nezindlela.
Cabangela izibonelo ezimbili ezilandelayo zama-URL.
Naphezu kokuthi i-URL yesibili ayifushane kakhulu, umuntu angasho kalula ukuthi yiliphiUmsebenzisi wewebhu uzothola: ikhasi elihlobene nokugqoka komuntu.
Ukudala ama-URL afanelekayo
Okulandelayo yizidingo zama-URL angcono kakhulu we-SEO:
Ama-URL kufanele abe mfushane ngangokunokwenzeka futhi angabi namagama angaphezulu noma amafolda.
Ukuba khona kwezinhlamvu ze-alphanumeric ku-lowercase kuphela. Ukusebenzisa ukwehliswa kwe-lowercaseingozi yokuphindaphinda kokuqukethwe.
Ukusebenzisa ama-hyphens ngamazwi ahlukene. Izikhala nokugxila kumele kugwenywe kusukela useshoizinjini zibheke amagama ahlukaniswe lawa manqaku ukuba abe amagama angashadile.
Ukusebenzisa amagama angukhiye uma kungenzeka.
Ukusetshenziswa kwamagama angukhiye kubangela ukuhlelwa okungcono futhi kuthuthukisa ulwazi lomsebenzisi.
I-Google ivula ukuthuthukisa isimo samapulatifomu aphephile aphethwe ku-protocol ye-HTTPS.Ucwaningo lubonisa ukuthi cishe amaphesenti angaphezu kwangu-50 emiphumela yokusesha ekhasini livela kumasayithi ku-HTPPS.
Ukufaka esikhundleni se-HTTP nge-HTTPS i-URL ishintsha, enezingozi eziningi ezibalulekile.I-Google ibheka ukufuduka kuhle kakhulu ngoba i-protocol ibhekwa njengephephile. Kodwa-ke, iziqondiso ezingama-301 kufanele zisetshenziswe ekuthuthukiseni ushintshofuthi ukusebenza kudingeka kuhlolwe ukuze kutholakale izinkinga ezingenzeka.
Okuqukethwe okungasetshenzwa kahle kulawulwa yi-URL eyodwa ye-ikhasi elilodwa lokuqukethwe. I-AJAX yenza i-URL eyodwa yamakhasi amaningi okuqukethwe, ikakhulukazi ukulahla izinjini zokusesha ngendlela ehlukileilebuli yekhasi lapho, bangakwazi ukuxhumanisa izimpawu zokugunyazwa nokuhambisana.
Nini ukuze ukwandise ama-URL
Izikhathi eziphelele zokwandisa ama-URL yi-platform kabusha futhi ukufuduka. Njengoba ubuchwepheshe noma isayithiukushintsha kwethekhnoloji, ukuhlelwa kabusha kwesipulatifomu kungashintsha futhi ngaleyo ndlela, yisikhathi esihle sokufaka izidingo mayelana ne-URL syntax nokuqukethwe.
Kubalulekile ukuqaphela ukuthi ama-URL akho kufanele ahlelwe kuphela uma kudingekaizizathu zobungcweti noma ukulungisa kabusha ukugwema izingozi.